Ganacsade Imaaraati ah oo kashifay sida dalkiisa uga faa'iideystay Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Ganacsade Imaaraati ah oo kashifay sida dalkiisa uga faa’iideystay Soomaaliya
Ganacsade Imaaraati ah oo kashifay sida dalkiisa uga faa’iideystay Soomaaliya
Abu Dhabi (Caasimada Online) – Hussain Sajwani, waa Ganacsade u dhashay Dalka Imaaraadka, waa milkiilaha Dharikadda Damac Properties, waxaa uu ka warbixiyay sababta ay Dubai u noqotay xarunta Ganacsiga Caalamka.
Xuseen waxaa uu sheegay in dowladda Imaaraadka ay ka faa’ideysatay burburka Dalalka Ciraaq, Soomaaliya, iyo Kuwait.
Waxaa uu Wareysi siinayay CNBC, oo laga leeyahay Mareykanka, xafiisyo cusubna ka furatay Magaalada Dubai, halkaas oo uu ka qeybgalay laguna wareystay.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay dagaalkii Ciraaq iyo Iran ee 1980 ilaa 1988ddii, faragelintii Ciraaq ee Kuwait sanadkii 1990kii iyo bur burkii Soomaaliya ee 1991dii.
Ganacsade Xuseen Sajwaan ayaa sheegay in Dubai ay markasta ka faa’ideysato dhibaatada ka jirta Gobolka ugana faa’ideysato si sahal ah.
Waxaa uu sheegay in maalqabeennada dalalka ay colaadaha iyo khilaafyada siyaasadeed ka dhacaan ay Hantidooda u soo wareejiyaan Dubai, halkaas oo amaan ah, waxaana uu sheegay in arrintaas ay fursad u tahay Imaaraadka.
Waxaa uu ku faanay in Dubai ay marti geliso dad ka yimaada dalalka China, Hindiya, Syria, kuwa Europe iyo Afrika inteeda kale, kuwaas oo Hantidooda ku badbaadsanaya Dubai.
Xuseen Hantidiisa waxaa ay gaareysaa $2.6 Bilyan oo doollarka Mareykanka ah, waxaana uu wax ku bartay dalka Mareykanka.